27 SEA Games မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့သူ ၁၉၆၉ ကျွန်းဆွယ် လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ဦးသိန်းလွင် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အာခေရတ်ကို အဆိပ်ခတ်သူများ
If that is true…China Myanmar treaties and CONTRACTS are NULL and VOID because it based on CRIME i.e. BRIBERY »
၈။ 27 SEA Games မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့သူ ၁၉၆၉ ကျွန်းဆွယ် လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ဦးသိန်းလွင်
ဒီဇင်ဘာ ၂၇-၂၀၁၃ M-Media By သီရိ
ရန်ကုန်။ ။ ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ် မီးရှူးတိုင်သယ်ဆောင်သည့် အခမ်အနားတွင် နိုင်ငံ အတွက် အာရှနှင့် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်များ ဆွတ်ခူးပေးခဲ့သော မြန်မာမွတ်စလင် အားကစားသမားများ ဖြစ်ကြသည့်
ဒေါ်ဘေဘီ (ဘော်လီဘော)၊ ဦးအေးလွင်(ဘောလီဘော)၊ ဦးဝင်းမောင်(လက်ဝှေ့)၊ ဦးမောင်လှ(ပြေးခုန်ပစ်)၊ ဦးသိန်းလွင်(လက်ဝှေ့) တို့ ပါဝင်သယ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ (၅) ဦး အနက်မှာ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲများ တွင် လက်ဝှေ့အားကစားနည်းဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် ဆုတံဆိပ်များ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူ လက်ဝှေ့ ချန်ပီယံဟောင်း ဦးသိန်းလွင်ကို M-Media မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။
အဖ ဦးမောင်အေး၊ အမိ ဒေါ်အေးခင် တို့မှ ၂၂ ရက် မေလ ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် ဟသာင်္တခရိုင် ထူးကြီး တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းလေးယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်စန်းအေးနှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ သားနှစ်ယောက် သမီးနှစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။M-Media ။ ။ အန်ကယ်သူငယ်တန်းမှစပြီးဘယ်လိုပညာကိုသင်ကြားခဲ့ပါသလဲ။
Tags: Burma, Southeast Asian Games, Yangon
This entry was posted on December 28, 2013 at 12:30 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.